Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahee miiliyoona 14 dabre - NuuralHudaa
Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahee miiliyoona 14 dabre
Weerarri Vaayirasii Koroonaa ammas guutuu addunyaa keessatti hammaatee kan itti fufe yoo tahu, hanga guyyaa har’aatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaahee 14,211,635 gahee jira. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasii kanaatiin du’anii ammoo 600,000 dabruu ragaan Johns Hopkins University irraa argame ni addeessa.
Vaayirasichi yeroo ammaa Ameerikaa, Braaziil fi Indiyaa keessatti hammaate. Haaluma kanaan Ameerikaa keessatti hanga ammaatti namoota 3,770,138 vaayirasichaan qabamuu mirkanaahe jidduu 142,065 du’uu gabaafame. Braazil keessatti ammoo namoota 2,048,697 vaayirasichaan qabamuu mirkanaahe jidduu 77,932 du’anii jiru. Haaluma walfakkaatuun Indiyaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaahee 1,040,948 akka dabrefi, namoonni 26,295 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du’uu gabaafme.
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa ibsa baaseen, guyyaa kaleessaa qofa namoonni 237,000 ol tahan vaayirasichaan qabamuu kan gabaase tahus, ogeeyyonni fayyaa garuu yeroo ammaatti lakkoofsi namoota guyyatti qabaman kanaa ol jedhan. Keessumattuu Prezdaantiin Iiraan Hasan Ruhaani ibsa gama Televizhiinaatiin kenneen, biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 25 ni caala jechuu isaa hordofuun, guutuu addunyaa keessatti rifaatuu hamaa uumee jira. Hanga har’aatti ministeerri fayyaa biyyattii lakkoofsi lammiilee isaanii vaayirasichaan qabamanii 269,440 qofa jechuun gabaasaa ture.
August 4, 2021 sa;aa 1:31 pm Update tahe